Degmada Bardaale oo Daadad xoogleh ku dhuftay Roobkii lixaad leh ka da’ay – Walaal24 Newss
Degmada Bardaale oo Daadad xoogleh ku dhuftay Roobkii lixaad leh ka da’ay
Daadad ka dhashay roobab lixaad leh oo ka da’ay degmada Berdaale ee gobolka Baay ayaa sababay burbur hantiyeed oo isugu jira guryo iyo goobihii ganacasiga ee degmadaasi.
Dadka ayaa gabi ahaanba ka guuray gudaha degmada, maadaama deegaanka oo dhan ay qarariyeen biyo, isla markaana ay awoodi waayeen in ay sii joogaan guryahooda dhanka kale ceelashii biyaha iyo musqulihii la isticmaalayay ayaa dhamaantood darsamay. taas oo dadka deegaanka walwel ku abuurtay,lagana cabsi qabo in ay ka dhalato xaalad caafimaad xumo.
Goobaha ganacsi ee dhibaatada xoogga leh soo gaartay waxaa ka mid ah dukaamadii raashinka iyo Badaacadihii dharka, waxaana gabi ahaanba qaaday daadadka,dakuna waxay xilligaan ay ku jiraan xaalado ka duwan midii hore.
waxaa dadka ka qaxay degmada Berdaale ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo shiidi macalin yaroow oo ku yaal duleedka koonfureed ee magaalada, ,waxaana saacadaha soo socoda laga cabsi qabaa in daadadku gaaraan,marka la qiyaaso xawliga iyo Xoogga ay ku socodaan goobaha ay dadku miciinka bideen.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo kulan soo dhaweyn ah la qaatay Safiirka Cusub ee Dowladda Talyaaniga u Jooga Soomaaliya
Daawo: Madaxweynaha Puntland oo ka carooday Su’aal uu weydiiyay Xildhibaan ka mid ah Barlamanka Puntland
Madaxweynaha JFS oo ku ammaanay Ciidanka Asluubta oo dib u howlgeliyay Warshadda Qalabka Dhismaha
Soomaalida ku nool Mareykanka oo loo cusbooneysiinayo sharcigii ay ku joogeen
Xafiiska Warfaafinta Maaxtooyada Soomaaliya oo bilaabay barnaamij lagu ciidsiinayo carruurta ay ka geeriyoodeen wariyeyaashii Soomaaliyed
Dhageyso: Wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay Xarunta Degmada Howl-wadaag
Dhageyso+Sawiro: Wiil yar oo ku dhacay War-biyo oo ku taala Degmada Wadajir
Dhageyso: Meleeshiyo Beleed oo boob iyo dil ku haya xaafada Kaawogodey ee Degmada Dharkeynley
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray waji kowaad ee Dib-u-heshisiinta Galmudug